Carefree in God - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > toriteny > Tsy miadana amin'Andriamanitra
Ny fiaraha-monina ankehitriny, indrindra eo amin'ny tontolon'ny indostria, dia iharan'ny fanerena mihamitombo: ny ankamaroan'ny olona dia mahatsapa tsy an-kijanona amin'ny zavatra iray. Ny olona dia mijaly noho ny tsy fahampian'ny fotoana, ny fanerena hanao (asa, sekoly, fiaraha-monina), fahasahiranana ara-bola, tsy fandriam-pahalemana ankapobeny, fampihorohoroana, ady, loza mitatao amin'ny tafio-drivotra, fanirery, famoizam-po, sns ... Ny adin-tsaina sy ny fahaketrahana dia lasa teny andavanandro, olana, aretina. Na dia eo aza ny fandrosoana goavana amin'ny sehatra maro (teknolojia, fahasalamana, fanabeazana, kolontsaina), dia toa mihasarotra hatrany ny olona eo amin'ny fiainana ara-dalàna.
Andro vitsy lasa izay dia nilahatra teo amin'ny kaontera banky iray aho. Teo anatrehako dia nisy raim-pianakaviana iray nitondra ny zanany kely (mety ho 4 taona) niaraka taminy. Nitsambikina nitsambikina tsy niraharaha, tsy niraharaha ary feno hafaliana ilay zazalahy. Ry rahalahy, oviana no fotoana farany nahatsapantsika izany koa?
Sao dia mijery an'io zaza io fotsiny isika dia miteny (somary mialona) hoe: "Eny, tsy miraharaha loatra izy satria tsy fantany akory izay hitranga amin'ity fiainana ity!" Amin'ity tranga ity anefa dia manana toe-tsaina ratsy ifotony amin'ny fiainana isika!
Amin'ny maha kristiana antsika, dia tokony hiady amin'ny faneren'ny fiaraha-monina isika ary hijery ny ho avy tsara sy ho matoky. Mampalahelo fa matetika ny kristianina no mahatsapa ny fiainany ho toy ny tsy manjary, sarotra ary mandany ny fotoam-bavany manontolo amin'ny fangatahana amin'Andriamanitra mba hanafahana azy ireo amin'ny toe-javatra manokana.
Nefa ndeha hiverina any amin'ny zanakay any amin'ny banky isika. Manao ahoana ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreniny? Feno fahatokisana sy fahatokisana ilay zazalahy ary koa feno hafanam-po, joie de vivre sy fahalianana! Afaka mianatra zavatra avy aminy ve isika? Hitan'Andriamanitra ho zanany isika ary tokony hifandray amin'ny ray aman-dreniny ny fifandraisantsika aminy.
« Ary Jesosy niantso zaza anankiray, dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Raha tsy mibebaka ianareo ka ho tonga tahaka ny zaza, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo tahaka ity zazakely ity, izay ho tonga tahaka ny zaza. lehibe indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra” (Matio 18,2- iray).
Tian'Andriamanitra ny manakarama zanaka izay nankinina tanteraka tamin'ny ray aman-dreny. Matetika ny ankizy dia tsy ketraka, fa feno fifaliana, fanahy ary fahatokisan-tena. Anjarantsika ny manetry tena eo anatrehan 'Andriamanitra.
Andriamanitra dia manantena ny fihetsiky ny ankizy amin'ny fiainana avy amintsika tsirairay avy. Tsy tiany hahatsapa na hanapotika ny tsindry amin'ny fiarahamonintsika Izy fa manantena antsika hanatona ny fiainantsika amim-pahatokiana sy fahatokisana mafy an'Andriamanitra isika:
« Mifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo! Te-hiteny indray aho hoe: mifalia! Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny halemem-panahy; akaiky ny Tompo. [Filipiana 4,6] Aza manahy na inona na inona; ary ny fiadanan’Andriamanitra, izay tsy takatry ny saina, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin’i Kristy Jesosy” (Filipiana). 4,4- iray).
Hita taratra amin'ny fomba fijerintsika ny fiainana ve izany teny izany sa tsia?
Ao amin'ny lahatsoratra momba ny fitantanana ny adin-tsaina, namaky momba ny reny iray izay naniry ny seza mpitsabo nify aho tamin'ny farany dia afaka mandry sy miala voly. Ekeko fa efa tonga tamiko izany. Misy zavatra diso tanteraka raha afaka "miala voly" fotsiny eo ambanin'ny drill mpitsabo natoraly izahay!
Ny fanontaniana dia hoe hatraiza ny toerana misy antsika tsirairay avy amin’ny Filipiana 4,6 ("Aza manahy na inona na inona")? Eo afovoany amin'izao tontolo mahasosotra izao?
An'ny Andriamanitra ny fifehezana ny fiainantsika! Zanany izahay ary mitatitra aminy. Eo ambany fanerena ihany isika raha miezaka mifehy ny fiainantsika, mba hamaha ny olantsika ary hanahirana ny tenantsika. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mifantoka amin'ny tafio-drivotra isika ary manadino an'i Jesosy.
Andriamanitra dia hanosika antsika ho amin'ny fetra mandra-pahitanay ny fomba fifehezana kely antsika amin'ny fiainantsika. Amin'ny fotoana tahaka izany dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny manary tena fotsiny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Ny alahelo sy ny fijaliana no manosika antsika ho any amin'Andriamanitra. Ireo no fotoana sarotra indrindra teo amin'ny fiainan'ny kristiana. Na izany aza, fotoana izay te-hankasitrahana manokana ary tokony hanentana ny fifaliana ara-panahy lalina ihany koa:
"Ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa, raha iharan'ny fakam-panahy samy hafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia miteraka faharetana. Fa ny faharetana dia tsy maintsy misy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tanteraka ianareo ka tsy hisy tsy ampy" ( Malagasy 1,2- iray).
Ny fotoan-tsarotra eo amin'ny fiainan'ny kristiana dia heverina fa hamoa voa ara-panahy, mahatonga azy ho lavorary. Tsy mampanantena fiainana tsy misy olana Andriamanitra. "Tery ny lalana", hoy i Jesosy. Ny fahasahiranana, ny fitsapana ary ny fanenjehana dia tsy tokony hametraka Kristiana amin'ny fahaketrahana sy ny fahaketrahana. Nanoratra ny apostoly Paoly hoe:
« Amin’ny zavatra rehetra dia ampahoriana izahay, nefa tsy ampahorina; Tsy mahita lalan-kivoahana, fa tsy enjehina, nefa tsy misy lalan-kivoahana; azera fa tsy levona »(2. Korintiana 4,8- iray).
Rehefa mifehy ny fiainantsika Andriamanitra dia tsy adino velively, tsy miankina amin'ny tenantsika mihitsy! Amin'izay dia tokony ho modely ho antsika i Jesoa Kristy. Izy no nialoha antsika ary nanome fahasahiana ho antsika:
Jesosy dia nampahorina tamin'ny lafiny rehetra, niharan'ny fanoherana, fanenjehana, fanomboana tamin'ny hazo fijaliana. Zara raha nahavita fotoana mangina izy ary matetika no voatery nandositra ny olona. Jesosy ihany koa dia noterena hanao fetrany.
“Tamin’ny andron’ny nofony dia nanao fitalahoana sy fifonana tamin’ny fitarainana mafy sy ny ranomaso mafy ho an’izay mahavonjy Azy amin’ny fahafatesana izy, ary noho ny fahatahorana an’Andriamanitra dia nohenoina, ary na dia zanaka aza Izy, dia nianatra tamin’ny niaritra fankatoavana izy; ary rehefa tanteraka Izy, dia tonga loharanon’ny famonjena mandrakizay ho an’izay rehetra manaraka Azy, izay noarahabain’Andriamanitra ho Mpisoronabe araka ny fanaon’i Melkizedeka » (Hebreo). 5,7- iray).
Niaina tao anatin'ny fahantrana lehibe i Jesosy nefa tsy nandray ny ainy teo an-tanany mihitsy ary tsy nanadino ny dikany sy ny tanjon'ny fiainany. Nankato ny sitrapon'Andriamanitra hatrany izy ary nanaiky ny toe-javatra rehetra navelan'ny rainy. Amin'izany, mamaky ity tantara mahaliana ity avy amin'i Jesôsy fony izy mbola somary malahelo:
“Ankehitriny dia malahelo ny fanahiko. Ary inona no tokony holazaiko? Ray ô, vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity? Fa izany no nahatongavako amin’izao ora izao » (Jaona 12,27).
Ekena koa ve ny toe-javatra iainantsika ankehitriny (fitsapana, aretina, fahoriana, sns)? Indraindray Andriamanitra dia mamela toe-javatra tsy mampahazo aina indrindra eo amin’ny fiainantsika, eny fa na dia fitsapana taona maro izay tsy fahadisoantsika aza, ary manantena antsika hanaiky izany. Hitantsika izany fitsipika izany ao amin’ity fanambarana manaraka nataon’i Petera ity:
“Fa fahasoavana no iaretan’ny olona fahoriana eo anatrehan’Andriamanitra noho ny fieritreretany ka iharan’ny tsy rariny. Fa tena laza izany rehefa miaritra toy izany ianao izay manota sy kapohina? Fa raha manao soa sy mijaly kosa ianareo, dia fahasoavana avy amin’Andriamanitra izany. Fa izao no niantsoana anareo hatao; fa Kristy koa dia nijaly ho anareo ka namela fianarana ho anareo, mba hanarahanareo ny diany: izay tsy nanota sady tsy nisy fitaka tao am-bavany, dia notevatevaina sy notevatevaina indray, tsy nandrahona hijaly, fa nanolo-tena. izay mitsara marina »(1. Petrus 2,19- iray).
Nankato ny sitrapon'Andriamanitra mandra-pahafatiny izy, nijaly tsy nanameloka ary nanompo antsika nandritra ny fijaliany. Manaiky ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ve isika? Na dia lasa tsy mahazo aina aza rehefa mijaly tsy manan-tsiny isika, iharan'ny fanerena amin'ny lafiny rehetra ary tsy mahatakatra ny dikan'ny zava-tsarotra iainantsika? Nampanantena antsika i Jesoa fa fiadanan-tsaina sy fifaliana avy amin'Andriamanitra:
«Fiadanana no avelako ho anareo, fiadanana no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza miherikerika foana ao am-ponao, ary aza matahotra” (Jaona 14,27).
“Izao no nolazaiko taminareo, dia ny mba ho ao aminareo ny fifaliako, ka ho feno ny fifalianareo” (Jaona 1.5,11).
Tokony hianatra hahatakatra isika fa ny fijaliana dia tsara ary mitondra fitomboana ara-panahy:
“Tsy izany ihany, fa mirehareha amin’ny fahoriana koa isika, satria fantatsika fa ny fahoriana dia mahatonga faharetana, faharetana ho fizahan-toetra, fizahan-toetra, ary fanantenana; fa ny fanantenana tsy mampahamenatra, fa ny Fanahy Masina, Izay nomena antsika, no naidina tao am-pontsika ny fitiavan’Andriamanitra. » (Romana 5,3- iray).
Miaina ao anatin'ny fahoriana sy tebiteby isika ary mahatsapa izay antenain'Andriamanitra amintsika. Izany no antony iaretantsika an'ity toe-javatra ity ary mamoa voa ara-panahy. Andriamanitra dia manome antsika fiadanana sy fifaliana. Ahoana no ahafahantsika mampihatra izany ankehitriny? Andao hovakiana izao fanambarana mahafinaritra avy amin'i Jesosy izao:
“Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra miasa mafy sy mavesatra entana! Ary Izaho hanome anareo fitsaharana, ento ny ziogako ka mianara amiko! Fa malemy fanahy sy manetry tena am-po Aho, ary "dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo hianareo"; fa malefaka ny ziogako ary maivana ny entako » (Mat 11,28- iray).
Tokony ho any amin'i Jesosy isika, avy eo hanome antsika fitsaharana. Mampanantena tena tsara tokoa izany! Tokony hapetratsika aminy ny enta-mavesatsika:
“Koa manetre tena eo ambanin’ny tana-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro, [ahoana?] apetraho aminy ny fanahianareo rehetra! Fa Izy no miahy anareo" (1. Petrus 5,6- iray).
Hatraiza marina ny fanolorantsika ny ahiahantsika amin'Andriamanitra? Ireto misy teboka manokana hanampy antsika amin'ity lafiny ity:
Tokony hanaiky sy hanolotra ny maha-olona antsika manontolo Andriamanitra.
Ny tanjon 'ny fiainantsika dia ny mampifaly an' Andriamanitra sy ny mametraka ny maha-olona antsika eo ambany Azy. Rehefa manandrana hampifaly ny rehetra isika dia misy ny fifanolanana sy ny adin-tsaina satria tsy azo atao izany. Tsy tokony hanome ny mpiara-belona amintsika ny hery hametrahana ny tenantsika ao anatin'ny fahoriana. Andriamanitra irery no tokony hitondra ny fiainantsika. Mitondra tony sy milamina ary fifaliana eo amin'ny fiainantsika izany.
Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho avy aloha.
Inona no manosika ny fiainantsika? Ny fanekena ny hafa? Ny faniriana hahazo vola be? Mba hialana amin'ny olantsika rehetra? Ireo tanjona rehetra ireo dia mitarika ho amin'ny adin-tsaina. Andriamanitra mazava dia nilaza ny tokony ho laharam-pahamehana:
« Koa izany no ilazako aminareo hoe: Aza manahy ny amin’ny ainareo, dia izay hohaninareo sy izay hosotroinareo, na ny amin’ny tenanareo, izay hotafinareo! Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana? Tandremo ny voro-manidina, mba tsy hamafy, na hijinja, na hanangona ho ao an-tsompitra ireny, ary ny Rainareo Izay any an-danitra mamelona azy. . Tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianao? Fa iza aminareo no afaka manahy na dia iray hakiho aza ny androm-piainany? Ary nahoana ianao no manahy momba ny akanjo? Jereo ny fanirin'ny lilia any an-tsaha: tsy miasa na mamoly ireny. Fa lazaiko aminareo fa na i Solomona aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin’ireo ny voninahiny rehetra. Fa raha ampitafin'Andriamanitra ny ahitra any an-tsaha izay mitombo anio sy rahampitso dia hatsipy ao anaty fatana, tsy lavitra ry zalahy , ry kely finoana. Koa aza manahy amin’izao filazana izao hoe inona no hohaninay? Na: inona no tokony hosotroinay? Na: inona no tokony hotafintsika? Fa izany rehetra izany no tadiavin'ny jentilisa; satria fantatry ny Rainareo Izay any an-danitra fa ilainareo izany rehetra izany. Fa katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany! Ary izany rehetra izany dia hanampy ho anareo, koa ankehitriny aza manahy ny amin'ny ampitso! Satria ny ampitso no hikarakara ny tenany. Ampy izay ny faharatsiany isan’andro » (Matio 6,25- iray).
Raha mbola mikarakara an'Andriamanitra sy ny sitrapony aloha isika dia handrakotra izay ilaintsika rehetra Izy!
Fampandoavam-bola ve izany ho an'ny fiainana tsy mandray andraikitra? Mazava ho azy fa tsia. Ny Baiboly dia mampianatra antsika hahazo ny mofo sy mikarakara ny ankohonantsika. Fa izany no laharam-pahamehana!
Feno zavatra manakorontana ny fiarahamonintsika. Raha tsy mitandrina isika, tsy hahita toerana ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mitaky fifantohana sy laharam-pahamehana izany, raha tsy izany dia hamantatra tampoka ny fiainantsika ny zavatra hafa.
Angatahina isika handany fotoana amin'ny vavaka.
Anjarantsika ny mitondra ny enta-mavesantsika amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra. Mampitony antsika amin'ny vavaka Izy, manazava ny eritreritsika sy ny laharam-pahamehantsika, ary mitondra antsika hifandray akaiky aminy. Nanome ohatra manan-danja ho antsika i Jesosy:
“Ary nony maraina koa, raha mbola maizina dia maizina ny andro, dia nifoha Izy ka nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tao. Ary Simona sy izay nomba azy faingana nanaraka azy; ary nahita Azy izy ka nanao taminy hoe: Ny olona rehetra mitady Anao” (Mar 1,35- iray).
Jesosy dia niafina mba hahita fotoana hivavahana! Tsy variana tamin'ny filana maro izy:
“Fa vao mainka miely patrana ny momba Azy; ary nisy vahoaka betsaka tafangona, mba hihaino sy ho sitrana amin'ny aretiny. Fa niala teo Izy ka nitoetra tany amin’ny tany mangingina sady nivavaka » (Lioka 5,15- iray).
Ao ambany fanerena ve isika, efa niely vetivety amin'ny fiainantsika? Avy eo isika dia tokony hiala sy manokana fotoana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny vavaka! Indraindray dia sahirana loatra isika vao mahalala an'Andriamanitra mihitsy. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mihemotra tsy tapaka ary mifantoka amin Andriamanitra.
Tadidinao ve ny ohatr'i Marta?
“Ary raha nandeha izy ireo, dia tonga tao amin’ny vohitra anankiray Jesosy; ary nisy vehivavy atao hoe Marta nampiantrano Azy. Ary nanana rahavavy atao hoe Maria izy, izay nipetraka teo anilan'ny tongotr'i Jesosy ka nihaino ny teniny. Be atao anefa i Marta tamin’ny fanompoana be; Fa nanatona izy ka nanao hoe: Tompoko, moa tsy mampaninona Anao va ny namelan'ny rahavaviko ahy irery hanompo? teneno izy mba hanampy ahy!] Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta! Manahy sy manahy ny amin'ny zavatra maro ianao; fa zavatra iray no ilaina. Fa Maria kosa nifidy ny anjara tsara izay tsy hesorina aminy » (Lioka 10,38- iray).
Andao hanokana fotoana hialana sasantsasany ary hanana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Aoka handany fotoana ampy amin'ny vavaka sy ny fianarana Baiboly ary ny fisaintsainana. Raha tsy izany dia ho sarotra ny hamindrana ny enta-mavesantsika amin'Andriamanitra. Ny manipy ny enta-mavesantsika an'Andriamanitra dia zava-dehibe ny manalavitra ny tenanao amin'izy ireo ary haka aina. «Tsy nahita ny ala avy teo amin'ny hazo ...»
Raha mbola nampianatra isika fa Andriamanitra koa dia manantena ny fitsaharana amin'ny Sabata tanteraka avy amin'ny Kristiana, dia misy tombony azo avy isika: manomboka amin'ny zoma hariva ka hatramin'ny sabotsy hariva dia tsy nisy olona azontsika raha tsy Andriamanitra. Manantena izahay fa mba nahafantatra sy nitana ny fitsipiky ny fitsaharana amin'ny fiainantsika farafaharatsiny. Ankehitriny, mila miato sy miala sasatra fotsiny isika, indrindra amin'ity tontolo mahasosotra ity. Tsy milaza amintsika Andriamanitra hoe rahoviana no tokony ho izy. Mila fitsaharana fotsiny ny olombelona. Nampian'i Jesosy ny fialan-tsasatra tamin'ny mpianany:
« Ary niangona teo amin’ i Jesosy ny Apostoly; ary nambarany taminy izay rehetra nataony sy izay nampianariny. Ary hoy Izy taminy: Avia ianareo irery, any amin'ny tany foana, ka mialà sasatra kely. Fa nisy maro izay tonga sy lasa, nefa tsy nahita andro hisakafoana akory” (Marka 6:30-31).
Raha toa ka tsy manam-potoana hisakafoanana tampoka intsony isika, dia fotoana tokony hialana sy hananganana am-pilaminana sy hilamina.
Koa amin'ny fomba ahoana no ametrahantsika ny ahiahintsika amin'Andriamanitra? Mariho:
• Manolotra an Andriamanitra manontolo ny tenantsika manontolo ary matoky azy isika.
• Ny fanjakan'Andriamanitra no loha laharana.
• Mandany fotoana amin'ny fivavahana isika.
• Manokana fotoana hitsaharana izahay.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tokony ho Andriamanitra ary i Jesosy no nanomana azy. Mifantoka Aminy isika ary manome toerana ho Azy eo amin'ny fiainantsika.
Hitahy antsika amin'ny fiadanana, tony ary fifaliana Izy. Manjary maivana ny enta-mavesany, na dia terena amin'ny lafiny rehetra aza isika. Jesosy dia noterena, fa tsy torotoro. Aoka isika hiaina amim-pifaliana ho zanak'Andriamanitra ary hatoky fa hitoetra ao Aminy ary hametraka ny enta-mavesantsika rehetra Aminy.
Eo ambany fanerena ny fiarahamonintsika, eny fa na dia ny kristianina aza, indraindray, fa Andriamanitra kosa dia mamorona toerana, mitondra ny enta-mavesatsika ary mikarakara antsika. Miaiky izany ve isika? Moa ve miaina ny fahatokiantsika an'Andriamanitra tanteraka ny fiainantsika?
Andeha hofaranana amin’ny filazalazan’i Davida momba ny Mpamorona sy Tompontsika any an-danitra ao amin’ny Salamo faha-23 i Davida (i Davida koa matetika no tandindonin-doza sy noterena mafy tamin’ny lafiny rehetra):
«Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mametraka ahy amin'ny ahi-maitso Izy, mitondra ahy ho any amin'ny rano mangina. Mamelombelona ny fanahiko Izy; Mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany Izy. Na dia mirenireny ao amin'ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy matahotra loza aho, fa Hianao no amiko; ny tsorakazonao sy ny tehinao, mampionona ahy. Manamboatra latabatra eo anoloako eo anoloan'ny fahavaloko Hianao; nohosoranao diloilo ny lohako, dia tondraka ny kapoakako. Fahasoavana sy fahasoavana ihany no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako; ary hiverina ho ao an-tranon’i Jehovah ho amin’ny fiainana aho » (Salamo 23).